Denizli Ski Center oo kordhay xiisaha ay u leedahay Isboortiga barafka | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYTurkish Aegean20 DenizliXarunta Denizli Ski Center ayaa kordhay xiisaha loo qabo barafka
16 / 02 / 2020 20 Denizli, Turkish Aegean, GUUD, TURKEY, TELPHER
xarunta barafka ee badaha badaha waxay kordhisay xiiseynta barafka
Xarunta Denizli Ski Center, oo ay aasaastay Denizli Metropolitan Municipal si ay fikir uga hesho dalxiiska jiilaalka ee magaalada, waxay kordhisay xiisihii barafka. Dawladda Hoose ee Magaalada Denizli, oo dhistay koox baraf ah oo leh 25 ciyaartooy shati haysta xilli ciyaareedkan, ayaa siiyay koorsooyin baraf ah oo bilaash ah 2020 oo qof sanadka 400.
Xarunta Denizli Ski Center, oo ah mid ka mid ah mashaariicda ugu muhiimsan ee ay hirgalisay Dawladda Hoose ee Magaalada Denizli, waxay jabinaysaa diiwaannada tirada dadka soo booqda, isla markaana waxay kordhineysaa xiisaha ay u qabaan barafka maalin kasta. Denizli waa mid ka mid ah goobaha ugu doortay tayada Snow isboortiga qaboobaha Ski Center, 4 dalka Turkiga ayaa sii kordheysa kor isboortiga ee barafka waxaa laga hiwaayadda iyo ciyaartoyda xirfadle by ski culus. Markii ay kordheen xiisaha ay u qabaan baraf-baradka magaalada, Denizli Magaalo-weyne ayaa billawday inay bixiso koorsooyin baraf barasho oo bilaash ah laga bilaabo sannadka 2016. Xilliga cusub, 07 oo qof ayaa la siiyay koorsooyin baraf ah ilaa iyo Janaayo 2020 Janawari 400. In kasta oo koorsooyinka la siiyay 3 maalmood usbuucii, ardayda waxay aadi karaan koorsooyinka muddo 15 maalmood ah inta lagu jiro fasaxa semesterka.
Kooxda Ski Team waxaa la aasaasay 2019
Kooxda Denizli Metropolitan Belediyespor Ski Team waxaa la aasaasay sanadkii hore iyadoo 25 ciyaartooy shati lihi ay kaqeybgaleen koorsooyinka bilaashka ah ee Dowlada Hoose ee Magaalada Denizli. Kooxda Büyükşehir Belediyespor Ski Team, oo khibrad u leh maalin kasta oo dhaafaya, ayaa kula tartamay 7 ciyaartooy shatiyeysan oo ku saabsan Tayeynta Tilmaanta Alpine ee lagu qabtay Kayseri bishii Janaayo 6-7, 2020.
Denizli wuxuu ku guuleysan doonaa horyaal ciyaaraha isboorti
Duqa Magaalada Magaalada Denizli Cusmaan Zolan ayaa sheegay in Dawlada Hoose ee Magaala Weyn ay bixisay koorsooyin bilaash ah laamo badan oo isboorti qof walboo laga bilaabo 7 ilaa 70 uu sameeyo isboorti. Isagoo sheegay in xiisaha isboorti jiilaalka ee magaalada uu maalinba maalinta ka dambeysa sii kordhayo Xarunta Denizli Ski Center oo ay ka bixiyeen koorsooyin baraf barasho ah oo ku saabsan xaaladdaan tan iyo 2016, Madaxweyne Cusmaan Zolan ayaa yiri, “Xarunteenna Denizli Ski Center, oo u adeegta orodada iyo xarumaha heer caalami, waa hibo iyo xirfad waxay soo dhaweyneysaa skweer. Xarunteena, oo ah tan ugu jecel dalxiiska jiilaalka, ayaa sidoo kale awood u siisay horumarinta barafka magaaladayaga. Waxaan rajeyneynaa, Deniz inuu ku guuleysan doono horyaal ciyaaraha isboorti.
Turkey ayaa martigelin doona ciyaaraha barafka ee